တရားဝင် Ubuntu နဲ့ Kubuntu တို့ CD တွေမှာမရှိတော့ဘူး Linux မှ
တရားဝင် Ubuntu နှင့် Kubuntu တို့သည် CD များပေါ်တွင်မရှိတော့ပါ
မှ ဘုရားရေ! Ubuntu ကို! ငါသတင်းကိုဖတ်ပြီး, ဤအချက်၌ကွန်ယက်၌ပဲ့တင်သံတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော Ubuntu (12.10) သည် 700MB အလေးချိန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ အလေးချိန် 800MB ရှိသည်။ ဤသည်ကဆိုပါတယ်ခဲ့ရာအရသိရသည် ကိတ် Stewart က ထဲမှာ ၏စာပို့စာရင်း Ubuntu ကို:
သမားရိုးကျစီဒီအရွယ်ပုံရိပ်၊ ဒီဗီဒီသို့မဟုတ်အခြားပုံရိပ်မရှိတော့ဘဲ 800MB Ubuntu ပုံရိပ်တစ်ခုတည်းကို USB သို့မဟုတ် DVD မှသုံးနိုင်သည်။
Ubuntu ဆာဗာသည် switch မှမထိခိုက်ပါ။
ပုံရိပ် (.ISO), DVD သို့မဟုတ်အခြား CD များအတွက်စံ CD အရွယ်အစားရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ 800MB ISO တစ်ခုတည်းကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းကို USB သို့မဟုတ် DVD မှအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီတော့ယခုသင်သိပြီ ... DVD မှ (သို့) USB မှတပ်ဆင်ရမည်
con Kubuntu ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ISO 700MB ကနေ 1GB အထိဖြစ်လိမ့်မယ်။
Kubuntu 12.10 သည် USB drive သို့မဟုတ် DVD အတွက် 1GB ပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။
Kubuntu 12.10 သည် USB သို့မဟုတ် DVD အတွက် 1GB ပုံရိပ်တစ်ခုရရှိသည်။
အပြောင်းအလဲအတွက်အကြောင်းပြချက်ကသူနှင့်အတူထုပ်ပိုးတိုးတက်စေရန်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ် Ubuntu ကို ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင်ယခု ၁၀၀ မီဂါဝပ်ထက်ပိုသောသူများသည် package များ၊ software များပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်အတူ Ubuntu Alternative CD ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းdeveloper များကဤပုံရိပ်ကိုဖန်တီးရန်အချိန်များစွာမဖြုန်းတီးကြပါ။
CD မှမည်မျှ install လုပ်ပြီး CD မှသာ install လုပ်နိုင်သနည်း။
အသုံးပြုသူ ၁၀ ယောက်ထက်ပိုသောပြသနာရှိလျှင် Ubuntu ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အလိုအလျောက်မှန်ကန်စေသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ Ubuntu ISOs မှာရှိတဲ့ MBs မှာရှိတဲ့အရွယ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့စာရင်းငယ်လေးကိုသင့်အားထားခဲ့ချင်တယ်။ ဘုရားရေ! Ubuntu ကို!:
Ubuntu ကို 12.10 Beta 1 745MB
Ubuntu ကို 12.04.1 695MB
Ubuntu ကို 11.10 695MB
Ubuntu ကို 11.04 685MB
Ubuntu ကို 10.10 693MB
Ubuntu ကို 10.04.4 694MB
Ubuntu ကို 9.10 690MB
Ubuntu ကို 9.04 699MB
Ubuntu ကို 8.10 699MB
Ubuntu ကို 8.04 699MB
Ubuntu ကို 7.10 696MB
Ubuntu ကို 7.04 698MB
Ubuntu ကို 6.10 698MB
Ubuntu ကို 6.06 696MB
Ubuntu ကို 5.04 627MB
Ubuntu ကို 5.04 625MB
Ubuntu ကို 4.10 643M
စကားမစပ်နောက်လာမည့် Ubuntu 12.10 တွင်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲများသည် Python3 တွင် ပို၍ များပြားသောအသုံးအဆောင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Python2 မှ Python3 သို့ရွှေ့ပြောင်းမှုများစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ X.org နှင့် Mesa ပုံစံအသစ်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာ ...)
PD: ဒီကြေငြာချက်ကိုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးက Kate Stewart ပါ။ ဒါပေမယ့်သူကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး မင်းသမီး ဟားဟား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » တရားဝင် Ubuntu နှင့် Kubuntu တို့သည် CD များပေါ်တွင်မရှိတော့ပါ
cd မရှိတော့ပါ၊ ကွန်ယက်တွင် live cd မရှိဟုပြောသောမှတ်စုများအချို့ရှိပါသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်သည် live function မပါဘဲ debian ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်; ငါနားလည်မှုလွဲခဲ့လား သို့သော် cd ကိုသာဖယ်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် live dvd ဖြစ်လိမ့်မည်။
Live DVD ကိုဆက်ရှိနေပါမည်
အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များအနေဖြင့် Debian တွင် LXDE, Gnome, KDE နှင့် Xfce ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တိုက်ရိုက်ရုပ်ပုံများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်စီဒီ (သို့) ဒီဗီဒီကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ရန်မသုံးခဲ့ပါ။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။
ဤတွင်အာဂျင်တီးနားရှိ optical discs များစျေးနှုန်းမြင့်တက်လာသည်။
* Pendrives များသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖျက်ခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ ပြန်လည်ရေးခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
* Versionitis မှခံစားနေရသောသူများအတွက် ** Virtualbox (အခြားသူများအကြား) သည်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
** Versionitis: ရှေ့သို့မတင်သောမည်သည့် Distro ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ် Distrowatch မှထွက်လာသောနောက်ဆုံးသောအရာများတပ်ဆင်ခြင်း။
အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်နားလည်တာပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဒီအချိန်မှာ ... စက်တိုင်းဟာအလုပ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီတွေကိုဖတ်ဖို့လုပ်ထားကြပါတယ်။
မပေးသူသည်သင်၏ hardware ကိုအချိန်တိုအတွင်းပေးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်
Ok, ဒါပေမယ့်ပညာရေးဆိုင်ရာလိုစက်တွေအများကြီးလိုချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းကိုတောင်စဉ်းစားမိရင်လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုချစ်ဖို့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ တခြားဖြန့်ဖြူးမှုများစွာရှိလို့ Ubuntu က SL SL ကမ္ဘာကြီးကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% နှင့်အတူကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေသည်။ အသုံးပြုသူအမြောက်အများကလက်ရှိလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်သူတို့၏တပ်ဆင်ခြင်းမီဒီယာသည်ခေတ်ကုန်သောစက်များပေါ်တွင်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ နည်းပညာသည်လျင်မြန်စွာအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာသည်နှင့်နည်းပညာကဤသို့ဆိုထားသည်။ လုံးဝရပ်စဲထားသောပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်နည်းပါးသောကွန်ပျူတာများရှိသည့်အသုံးပြုသူများအတွက် GNU / Linux တွင်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။
ကောင်းပြီ၊ မခက်ခဲသော usb keys ကိုသုံးရန်။
ဒါအမှန်ပဲ၊ livecd mode မှာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကပိုမြန်တယ်။
USB မှ boot မပြုနိုင်သော pc ပေါ်တွင် unity သို့မဟုတ် kde ကိုသူတို့ခဲထည့်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ USB နီးပါးတွင် ၅ နှစ်ခန့်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သဖြင့်အထူးသဖြင့် "Versionitississ" Hehehe!
@ KZKG ^ Gaara (သို့) ဘာသာရပ်ကိုသိသူမည်သူမဆိုအထက်ပါက Python3အကြောင်းပြောတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုကသုံးစွဲသူအဆင့်မှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ??? ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပျက်သွားမှာလား၊ Python 2.6, Python 2.7 နဲ့ Python3ရှိနိုင်မလား။ နှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအစီအစဉ်ကိုသာလိုအပ်သောတကိုအသုံးပြုသည်။ လိုက်လျောညီထွေကော?
Ubuntu ကိုအချိန်တော်တော်ကြာအသုံးမပြုခဲ့ပါ။ ဗားရှင်း ၁၀.X တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုသိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်အေးခဲစေသောကြောင့်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ CD တွင်မကြာသေးမီကထည့်သွင်းထားသော openSUSE (marvel of distro XD) CD နှင့်အရာအားလုံးအလွန်ရှင်းလင်းသွားသည်။ ဘာမျှမရှိသလောက်ဖြစ်ကာနောက်ဆုံးတွင် application များနှင့် update များကိုဖြည့်သည့် DVD ကို download လုပ်ပြီးသွားသည်။ ငါဆုံးဖြတ်ချက်ပိုပြည့်စုံ desktop ကိုရှိသည်ဖို့ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒွန် Vito ဟုသူကပြောသည်
အချိန်ကုန်မြန်သည်ကိုကြည့်ပါ၊ ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ပထမဆုံး Ubuntu version 6.06 ။ ၎င်းသည် (၆) နှစ်တာကာလဖြစ်သော်လည်းအချိန်ကုန်လွန်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ဝက်မျှသောဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တူနေဆဲဖြစ်သည်။
Don Vito အားပြန်ပြောပါ
Man ... အရင်တုန်းကသူတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ... Ubun / kubun ကို USB ကနေ boot မလုပ်နိုင်တဲ့ "ဟောင်း" ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ဒီစီဒီတွေကိုစုဆောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်၊ ဒီကံမကောင်းတာကဒီဗီဒီမှာလုပ်ရတာတစ်ခုပဲ။
သင်၏ကွန်ပျူတာသည် DVD နှင့် USB ကိုမပံ့ပိုးပါက Live ဗားရှင်းတွင် Ubuntu + Unity ၏အလေးချိန်ကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် CD ဗားရှင်းရှိသည့် Xubuntu ကို အသုံးပြု၍ သင့်ကွန်ပျူတာကသင့်အားအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
ငါထင်တာက ISO တိုးတက်မှုဟာယုတ္တိရှိတဲ့အဆင့်ပဲလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဦး တည်တဲ့နေရာမှာပိုကောင်းတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာတွေရှိသေးတယ်။
Hmm ကောင်းပြီ၊ ယခုငါ USB မှတ်ဉာဏ်သည်စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားပြီး၊ CD / DVD drive မပါဘဲလာသည့် Netbook များလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်ထင်သည်သို့မဟုတ်ခံစားရသည့်အရာတစ်ခုလည်းသတိပြုမိသည်။ USB မှ boot မလုပ်နိုင်သောကွန်ပျူတာအချို့အတွက် CD မှတပ်ဆင်ရန်အဆုံးမဲ့ Linux option များရှိနေသေးသည်။
ဖြန့်ဖြူးမှု၏ iso ပုံသည်မည်မျှကြီးကြောင်းဂရုမစိုက်ပါ။ တကယ်တော့နည်းနည်းလေးရောင်ပြန်ဟပ်တယ်၊ ငါ CD သို့မဟုတ် DVD ကိုနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။ Windows စက်တွေအတွက်ဒရိုင်ဘာတွေကိုတောင်တောင်မှမသုံးတော့ဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအင်တာနက်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်လို့ပါ။ ပြီးတော့မိတ္တူတွေကို pendrives မှာသိမ်းထားတယ်။ တကယ်တော့ဒီမှာစပိန်နိုင်ငံမှာ၊ အပျိုစင်ဒီစီဒီတွေကိုရှာဖို့ခက်တယ်။ အပျိုစင်ဒီဗွီဒီတွေကိုအခုထိရောင်းနေတုန်းပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅-၆ ​​နှစ်ကသူတို့ဟာရပ်တည်ချက်အတော်များများမှာနေရာယူထားပြီးအခုဆိုရင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုလောက်ကိုပဲထောင့်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။
စီဒီများ / ဒီဗီဒီတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောဖို့အခက်အခဲရှိတာစုစုပေါင်း။
ငါ cd သို့မဟုတ် dvd heheheh ကိုဘယ်တော့မှမသုံးဘူး
သူငယ်ချင်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Kubuntu သည်စီဒီတစ်ခုနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းအဘယ်လေးနက်သောသတင်းများ၊ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်မိသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်စီဒီများကိုသာဖတ်ရှုသောနောက်ဆုံးအဖွဲ့သည်၎င်းကိုလွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ခန့်ကလွှင့်ပစ်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသေးသည်။ SEAT 8 ကိုအသုံးပြုသူ ၁၀ ယောက်ရှိလျှင်ထုတ်လုပ်သူကအပိုပစ္စည်းများကိုဆက်လုပ်သင့်တယ်။
MuPDF: အလွန်လျင်မြန်ပြီးပေါ့ပါးသော PDF ကြည့်ရှုသူ